Vaovao - Nanjing dia manitsy ny fenitra momba ny saram-piantohana sy ny fiampangana, fiara elektrika madio hatramin'ny 1.68 yuan isaky ny kWh
Nanjing dia manitsy ny fenitra momba ny saram-piantohana sy ny fiampangana, fiara elektrika madio hatramin'ny 1.68 yuan isaky ny kWh
Tamin'ny 9 Jolay, namoaka ny «Fampandrenesana momba ny fanitsiana ny fenitra fiampangana amin'ny famahana sy ny fanoloana ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra madio» ny birao misahana ny vidin'ny tanàna Nanjing. Ny fanamarihana dia nanambara mazava tsara fa ny bus fitaterana herinaratra madio (12m) nohajaina sy manolo ny fenitra fihenam-bidy indrindra ho an'ny serivisy, fiara elektrika madio Ny fenitra famerana ho an'ny serivisy (fito na latsaka) dia 1.46 yuan isaky ny kWh, 2.00 yuan is kilometatra iray kilometatra, ary 1,68 yuan isaky ny kWh.
Ny sarany farany ambony amin'ny fanoloana fiara elektrika (fito na latsaka) dia tsy voahitsy, ary mbola 0,68 yuan isaky ny kilometatra.
Ireto ny fampandrenesana manokana:
Fampandrenesana momba ny fanitsiana ny fenitra fiampangana ho an'ny famahanana sy ny serivisy fanoloana ny fiara mandeha amin'ny herinaratra madio
Ny biraon'ny vidin'ny distrika tsirairay, ny biraon'ny fanaraha-maso ny tsena ao amin'ny Komitin'ny fitantanana distrika vaovao Jiangbei, ary ny sampana fananganana sy fiasan'ny asa fanaovan-tsolika sy fanoloana tsirairay:
Raha ny fiovana amin'ny vidin'ny vokatra menaka voadio tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2018, mifanaraka amin'ny "Notice of the Provincial Price Bureau on Determining the Electrical Price and Service Price of Electric Vehicle Charging and Replaces Facilities" (Su Shigong [2014 ] No. 69) sy ny Birao fihenan'ny vidin-tanàna Ny fampandrenesana ireo olana mifandraika amin'ny vidin'ny fiarakodia sy ny fanoloana fitaovam-pitaterana elektrika (Ning Lian Gong  No. 87) dia mamaritra fa ny raharaha mifandraika amin'ny fanitsiana ny fenitra iampangana ho an'ny famahana sy fanoloana fiara elektrika eto an-tanànantsika dia ireto manaraka ireto:
Voalohany, amboary ny fenitra fihenam-bidy avo indrindra amin'ny bus fitaterana herinaratra madio (12m) ary ny fanovana serivisy, ny fenitra fihenam-bidy avo indrindra ho an'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra madio (fito na latsaka), hatramin'ny 0,12 yuan per kWh, 0,16 yuan isaky ny kilometatra, 0,12 yuan isaky ny kWh. Fiara fitateram-bahoaka mandeha herinaratra madio (12m) nohafarana ary mifamadika ny serivisy famerana faran'izay betsaka, fiara mandeha amin'ny herinaratra madio (fito na latsaka) fenon'ny serivisy famerana fatratra 1.46 yuan isaky ny kWh, 2,00 yuan isaky ny kilometatra, 1,68 yuan isaky ny kWh.
Faharoa, ny fiara elektrika madio (fito na latsaka) ny serivisy fifanakalozana herinaratra dia tsy voahitsy, mbola 0,68 yuan isaky ny kilometatra.
3. Ity fampandrenesana ity dia hampiharina hatramin'ny 10 Jolay 2018.